🥇 ▷ Apple waxay ku dhawaaqeysaa iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max ✅
Apple waxay ku dhawaaqeysaa iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max
Dhacdo la qabtay shalay (10) Apple waxay ku dhawaaqday jiilkeeda cusub ee iPhones. Waxaa jira saddex nooc oo cusub: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iyo iPhone 11 Pro Max. Qalabkaani waa ku-xigeeno toos ah iPhone XR, iPhone XS iyo iPhone XS Max, siday u kala horreeyaan. Dhamaan seddexda gacmood waxaa ku shaqeeya A13 Bionic processor awood badan, processor-ka moobiilka ee ugu awooda badan abid la abuuray.
Inta aynaan u guda gelin arrinta tilmaamaha, waxaa muhiim ah in laga faalloodo muuqaalka muuqaalka ee telefoonnada gacanta. Xaqiijinta xanta, Apple wuxuu qaatay qorshe gebi ahaanba ka duwan abaabulka muraayadaha kamaradaha. Waxaa jira madal laba geesood ah iyo qorshe leh laba ama saddex muraayadood, oo kuxiran moodeelka. Naqshadeynta ayaa u horseeday cilado badan oo xusuus ah, iyagoo u barbar dhigaya qaabkan foornada wax lagu kariyo ama makiinada cuntada lagu kariyo. Internetka ma cafiyo !.
Eeg faahfaahinta gaarista iPhones-ka cusub:
Faahfaahinta iPhone 11
Shaashadda: 6.1 inch Liquid Retina HD LCD oo leh 1792 × 828 pixel resolution, True Tone, dhalaalaya ugu badan ee 625 nits, HDR10 iyo Dolby Vision;
Processor: Apple A13 Bionic (oo ku saleysan habka wax soosaarka 7nm)
Kaydinta Gudaha: 64 GB, 128 GB ama 256 GB
Rear Cameras: 12 megapixel (f / 1.8) oo leh 12 megapixel (f / 2.4) + xasilinta muuqaalka indhaha oo heer sare ah oo leh aragti heer 120 ah;
Kaameradda hore: 12 megapixel TrueDepth oo leh muraayad fudeedka f / 2.2 ah, xasilinta fiidiyaha fiinikada ah iyo toogashada 4K illaa 60 fps;
Isku xirnaanta: 4G LTE Gigabit oo leh 4 × 4 MIMO, Wi-Fi 6 802.11ax oo leh 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, Ultra Wide Band Spatial Aqoonsiga Chip, Dual Chip (eSIM iyo Nano-SIM)
Durbaan: Ilaa 17 saacadood oo dib u ciyaarid fiidiyoow ah, 10 saacadood oo ah fiidiyaha fiidiyowga ah iyo 65 saacadood oo ah dib ucelin maqal ah. Qalabka wuxuu ballan qaadayaa 1 saac oo batteriga ka badan tan iPhone XR. Apple waxay iibin doontaa lacag-bixinno deg-deg ah (18W), oo ballan qaada 50% lacag 30 daqiiqo gudahood;
Dheeraad: IP68 waxay sharciyeysan tahay iska caabbinta biyaha (qoto dheer ilaa laba mitir ilaa 30 daqiiqo)
Cabirrada: 150,9 × 75.7 × 8,3 mm
Miisaan: 194 garaam
Nidaamka Howlgalka: iOS 13
Faahfaahinta iPhone 11 Pro
Shaashadda: 5.8 inch Super Retina XDR OLED oo leh 2436 × 1125 xallinta pixel, True Tone, dhalaalaya ugu badan ee 1,200 nits, HDR10 iyo Dolby Vision;
Rear Cameras: 12 megapixel (f / 1.8) oo leh xasillooni muuqaal muuqaal ah + heer sare 12 megapixel (f / 2.4) oo leh muuqaal 120 ah oo muuqaal ah iyo 12 megapixel (f / 2.0) telephoto leh xasillinta muuqaalka indhaha;
Durbaan: Illaa 18 saacadood oo dib u ciyaarid fiidiyow ah, 11 saacadood oo ah fiidiyaha fiidiyowga ah iyo 65 saacadood oo ah dib u ciyaar maqal ah. Xaraashka degdega ah (18W) ayaa jira.
Cabirrada: 144 × 71.4 × 8.1 mm
Miisaan: 188 garaam
Faahfaahinta iPhone 11 Max
Shaashadda: 6.5-inch Super Retina XDR OLED oo leh 2688 × 1242 pixel resolution, True Tone, dhalaalaya ugu badan ee 1,200 nits, HDR10 iyo Dolby Vision;
Durbaan: Ilaa 20 saacadood oo dib u ciyaarid fiidiyow ah, 12 saacadood oo ah qulqulka fiidiyaha iyo 80 saacadood oo ah dib u soo celinta codka. Xaraashka degdega ah (18W) ayaa jira.
Cabirrada: 158 × 77.8 × 8.1 mm
Miisaan: 226 garaam
Seddexda cusub ee taleefannada casriga ah ee Apple waxay siinayaan diyaar u ahaanshaha iibka laga bilaabo Jimcaha, laakiin ma imaan doono illaa Sebtember 20-keeda. IPhone 11 wuxuu lahaan doonaa sicirka aasaaska ah $ 699 , halka noocyada Pro iyo Pro Max laga heli doono $ 999 iyo $ 1,099, siday u kala horreeyaan.
Waa inaad sidoo kale akhridaa!
Apple TV +: Adeegga qulqulka waxaa laga heli doonaa Brazil bisha Nofembar markay tahay $ 9,90
Apple Watch 5: Fiiri dhammaan macluumaadka ku saabsan saacadda cusub ee smart